Arabia Saodita: Governemanta Mikendry Manokana Ireo Bilaogera, Masoivoho Saodiana Vaovao Ao Etazonia, Ary Resaka Maro Hafa Koa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2017 2:12 GMT
Asa goavana no nataon'i Khloud tamin'ny famintinana lahatsoratra nivoaka vao haingana kely tao amin'ny BBC izay niresaka momba ny fahakivian'ny Akademian'ny Mpanjaka Fahad amin'ireo boky sasany, izay miys ampahany milaza fa “maharikoriko” ny Jiosy ary “kisoa” ny Kristianina. Ash, ireo izay naharitra 12 taona tao amin'io sekoly io hatramin'ny taona 1999, dia milaza fa “lainga masina,” avokoa izany ary manazava momba izay nahatonga an'io fikorontanan-tsain'ny olona niseho vao haingana kely io:
Araka ny voalazan'ny Bloggers Observatory dia, vao haingana kely, nisy fampielezankevitra nataon'ny governemanta hamelezana blaogera lahy teratany Saodiana miisa 4, Fouad Al-Farhan, Riyadhawi, Mashi Sah (azo adika amin'ny hoe “Ny làlana tokony ho aleha”), ary Rajul Al-Huriyya (midika hoe “Olon'ny fahafahana”). Maro ireo blaogera hafa namaly izany; Al-Failasouf (midika hoe “Ilay filozofa”) izay nanoratra (Ar) lahatsoratra iray momba an'io ka nampitondrainy ny lohateny hoe “Taratasy iray”. Hoy izy nanomboka izany: “Zavatra mahamenatra ny fahanginantsika, amin'ny maha Saodiana blaogera antsika.” Nitantara tantara mitovitovy amin'io i Aya , ny fampidirana am-ponja ilay Ejiptiana blaogera Abdel Kareem Suleiman (anaram-bosotra: Kareem Amer) mandritry ny efatra taona, “nomelohina izy vokatry ny fanompany ny Filoham-pirenena sy fandrisihany ny olona hankahala ny Silamo.”
Mikasika ilay trangan-javatra niseho vao haingana indrindra nahafatesan'ilay olo-malaza Anna Nicole Smith, dia toa nahavita tsianjery ny fandehan'ny tantara mihitsy i Yazeed, vokatry ny fifantohan'ny media diso tafahoatra loatra an'io raharaha iray io. Diso fanantenana izy tamin'i Larry King mpizara vaovao ao amin'ny CNN ka nilaza izy hoe: “Isak'alina, isak'alina (mahafinaritra ahy ny mihaino CNN rehefa hatory iny aho) fa dia io trangan-javatra io foana nefa no resahany ao, tsy mba miova mihitsy ny vahiny nasainy ao (matetika), mitafatafa momba an'io trangan-javatra hafahafa io foana ry zareo.” Nambarany ihany koa fa efa novainy ho Fox News ny “onjam-peo fangalàny torimaso”. Mety efa tsy dia nahaliana ny maro intsony ireny hadalàna rehetra ireny. Raha ny fomba fijerin'i Aya dia manan-danja kokoa amin'ny media ny fahafatesan'i Anna Nicole noho i Iràka. Raha momba an'i Iràka indray, nametraka fanontaniana maro mahaliana i Ubergirl87 tao anatin'ny lahatsorany nivoaka farany, mikasika ilay firenena potiky ny ady.
Ireo roa nahafinaritra anay indrindra teo amin'ny tontolon'ny blaogy Saodiana, Two Dykes and a Closet, niverina indray nitondra vaovao vitsivitsy; efa misy DVD an'i The L Word namidy amin'izao fotoana izao ao Arabia Saodita. Te-hahafantatra angamba izy roa vavy ireo raha mbola mizara lahatsoratra mahaliana ho an'ny mpamaky azy ny Crossroads Arabia; ohatra amin'izany ilay hoe “Nilaza ampahibemaso ny tsiambaratelony ireo tovovavy Saodiana anankiroa mifankatia.”
Namoaka lahatsoratra i Sous miresaka momba ny fahasahiranan'ny mponina ao Arabia Saodita amin'ny fitadiavana olona hiasa an-trano. Nanome rohy mitondra antsika mivantana aminà lahatsoratra iray miresaka momba ilay Saodiana nigadra mandra-pahafatiny i Sam nohon'ny fitondràna fiara halatra. Raha ny hevitro manokana, anefa, dia tsy mino aho fa nangalarina ilay fiara. Voaresaka ihany koa i Syed tamin'ny fampiasàna sary mahatsikaiky niresahana momba ny fanambadiana Saodiana sy ny tahan'ny fisaraham-panambadiana mifandraika amin'izany. Namoaka lahatsoratra (amin'ny fiteny Arabo) i Green Tea momba ny paikadin'ny firenena, novolavolain'ny filankevitry ny Ministera ao Arabia Saodita, mba ho “fitandroana ny fahamendrehana ary ny ady amin'ny kolikoly” eo anivon'ireo rehetra manampahefana ao amin'ny governemanta, tsy anavahana izay toerana misy azy sy ny asa sahaniny. Nisy lahatsoratra amin'ny fiteny Anglisy nifandraika tamin'izany hita tao amin'ny vohikala an-tseraseran'i the Khaleej Times.